Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya oo Shabaab kala wareegay deegaano Hiiraan ka tirsan – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya oo Shabaab kala wareegay deegaano Hiiraan ka tirsan
Ciidamada Dowladda oo kaashanaya kuwa Itoobiya ee howlgalka Amisom ka tirsan, ayaa mar kale Gobolka Hiiraan waxa ay kula dagaalameen dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Dagaalkaan ayaa ka dhacay Deegaano hoostagga Buq-aqable, halkaasi oo ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya si rasmi ah Shabaab ay uga saareen.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Xooga dalka Somaliya ee Gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Col. Maxamed Cumar ayaa wuxuu u sheegay ciidamadooda oo kaashanaya kuwa Itoobiya inay Shabaab ka saareen Buq-aqable.
Buq aqable, waxa ay 90-KM dhanka Koonfured ka xigtaa Xarunta Gobolka Hiiraan ee Beledweyne, dhanka qoraxsin, waxaana hada gacanta ku haayo ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya.
“Ciidankeena shalay subax ayeey Ceel cali ka soo dhaqaaqeen xalay waxaan ku hooyanay Buq aqable, saddex mar ayaan dagaalanay Shabaabka 13 nin ayaan ka dilnay labo qori oo Ak-47 ah, waan ka qabsanay, anaga dhankeena wax Khasaare ah nama soo gaarin.” Ayuu yiri Sarkaalkaan.
Hadalkiisa wuxuu intaasi raaciyay inay jiraan Saraakiil ka tirsan Shabaabka oo ay ku dhaawaceen dagaalka, wuxuuna ka xusay Sarkaal magaciisa lagu soo koobay Dhuxul oo Saraakiisha sare ee Shabaabka ka tirsan.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ayuu sheegay inay xaqiijinayaan ammaanka Buq-aqable, kadibna qorshaha uu yahay inay ku dhaqaaqaan deegaano kale oo ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Al Shabaab ayaa Khamiistii weerar culus waxa ay ku qaadeen Deegaanka Halgan oo ka tirsan Gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay kula dagaalameen ciidamada Itoobiya.
Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay afar nin